Warbixin Ku Saabsan Deegaanka Baytulamin. – DARYEELRELIEF
Qorshaha Dhisme ee Baytulamin Si loo dhowro nidaamka dhisme ee deegaanka, sarana loogu qaado bilicda magaalada isla makaana ay magaaladu u noqoto mid diyaar u ah isbadala laga dhaxlo xadaaradda iyo horumarka, ayay mutacalimiinta Baytulamin iyo weliba Council-ku ku dhaqaaqeen talaabo aad wax uga baddali doonta mustaqbalka magaalada Baytulamin iyo deegaanka hoos yimaadaba. Maadaama dhulka ay dhismayaasha magaaladu ku faafi doontay uu wakhtigan yahay dhul bannaan, ayaa wuxuu Council-ku go’aansaday in marka hore la diyaariyo naqshadda magaalada inta aan la bilaabin dhismaha.
Naqshada Magaalada Baytulamin
Waxay naqshadani muujinaysaa halka laga dhisayo goobaha dhismayaasha goonida loo leeyahay, kuwa ay bulshadu wadaagto, wadooyinka, jardiinooyinka, marinka laymanka tamarta, marinka laymanka taleefoonada iyo Internet-ka, marinka biyaha la isticmaalo, marinka bulaacadaha iyo biyaha roobka iyo weliba waxyaaba kale oo fara badanka. Dhisme kasta ee ku yaal magaalada wuxuu yeelan doonaa cinwaan gooni u ah kaasoo lagu aqoonsan karo dhismahaas. Tan macnaheedu waxaa weeye wuxuu dhisme kaste yeelan doonaa lambar, magac waddo iyo weliba magaca deegaanka uu ku yaalo. Wuxuu kaloo Council-ku go’aan ku gaaray in magaalada loo kala qaybiyo dhowr deegaan (Deegaanka Koobaad, Deegaanka Labaad iyo Deegaanka seddexaad) sida ku qoran naqshadda magaalada Baytulamin. Si bilicda magaalada loo dhowro isla markaana la isku xijiyo dhulka dadka iibsanaya ay wakhti yar gudihiis ku dhisanayaan wuxuu Council-ka soo saaray shuruudo la xariira dhul-bixinta iyo dhismaha saddexda deegaan.
Deegaanka 1-aad iyo Shuruudihiisa
Deegaanka 1-aad waa ubucda magaalada, wuxuuna wabiga Jubba u jiraa 3 kiilo mitir. Waa halka uu Council-ku qorshaynayo in laga dhiso dhismayaasha casrigaa ee goonida loo leeyahay iyo weliba kuwa uu Council-ku leeyahay ama uu maalgaliyo. Shuruudaha looga baahan yahay in qofka dhulka ka iibsanaya deegaanku uu la kulmo waxaa ka mid ah:-
In dhulkaas dhisme sar (dhagax ama bulukeeti) ah laga dhiso (sida filooyinka ama dabaqyada)
In dhulkaas 1 sano gudihiis lagu dhiso
In Council-ka lala soo socodsiiyo haddii dhulkaas ama dhismaha laga dhiso la sii iibinayo.
In dhulkan aanan loo isticmaali karin beer ahaan ama xoolo dhaqasho.
Deegaanka 2-aad iyo Shuruudihiisa
Deegaanka labaad sidoo kale waxaa laga dhisayaa dhismayaasha goonida loo leeyahay iyo weliba kuwa council-ka. Shuruudihiisa la xariira iibsashada iyo dhismaha dhulka deegaanka waxaa ka mid ah:-
Dhulkaas 1 sano gudihiis lagu dhiso. Dhismuhu noocu doono ayuu noqon karaa.
Deegaanka 3-aad iyo Shuruudihiisa
Deegaanka 3-aad waa halka uu Council-ku ugu tala galay in ay dhulka iibsadaan balse aanan awood u lahayn in ay 1 sano gudihiis ku dhistaan. Shuruudaha la xiriira Deegaanka 3-aad waxaa ka mid ah:-